Google Reader avy amin'ny Google Labs | Martech Zone
Google Reader avy amin'ny Google Labs
Alahady, Jolay 23, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Tara loatra loatra izao ary tokony tena hatory aho. Saingy tsia aho. Omeko tsiny ao amin'ny Google izany. Nijery rohy vitsivitsy izay nanondro ny bilaogiko tao amin'ny Google Analytics aho ary nahita: http://www.google.com/reader/view/
Nanapa-kevitra ny hahita ny rohy aho, ka natsipiko tao anaty bara adiresiko izany. Faly aho fa nanao izany! Google dia nanangana mpanadin-tsakafo kely miorina amin'ny tranokala. Apetrako ao daholo ireo famandrihako rehetra amin'ireo bilaogy zahana isan'andro. Google no manao ny ambiny. Izy io dia manara-maso izay fidirana novakiako ary iza amin'ireo izay mbola tsy hitako. Io dia ahafahako manisy marika ny fahano. Io dia rafitra fanasokajiana bebe kokoa ho an'ny sakafonao. Azonao atao ihany koa ny manipy kintana amin'ireo fidirana tena tianao.
Ny mpamahan-tsakafo amin'ny Internet dia tsara ho ahy hatramin'ny namakiako na tany am-piasana na tany an-trano. Okay, tsy ratsy. Tsy dia zavatra manaitra loatra loatra hoy ianao…
Noraisiko androany ny Freakonomics sy The Long Tail fa mbola tsy nanomboka tamin'izy ireo aho. Ho eo amin'izy ireo rahampitso aho!
Diso i Jack Welch
Bill Gates sy Napoleon Dynamite
Jul 26, 2006 amin'ny 7: 00 AM
OK, azonao aho. Tsy maintsy mandeha mijery Google Reader aho izao!
Apr 21, 2007 amin'ny 4: 02 AM
Miarahaba anao…Misaotra, mahafinaritra ny mahazo fanehoan-kevitra tsara toy izao.:
[URL=http://www.macronet.org/cgi-bin/netforum/cafb/a/3–23]famantarana replika[/URL] [URL=http://www4.gu.edu.au/cgi- bin/netforum/artspg/a/3–2]mividiana ultram an-tserasera[/URL] [URL=http://www.usawaterways.com/cgi-bin/netforum/nashbridge/a/3–29]vicodin amin'ny Internet[/ URL] [URL=http://www.macronet.org/cgi-bin/netforum/cafb/a/3–24]Tsy misy fampindramam-bola amin'ny fax [/URL] [URL=https://itc.utk.edu/ cgi-bin/netforum/theatre100/a/3–22]kitapo replika[/URL] [URL=http://www.usawaterways.com/cgi-bin/netforum/nashbridge/a/3–30] frontline plus ho an'ny alika[/URL] [URL=https://itc.utk.edu/cgi-bin/netforum/theatre100/a/3–21]FIRAISAM-PIRENENA MAIMAIM-POANA [/URL]
Tsy misy fampindramam-bola amin'ny andro fax FAMPANDROSOANA OLONA MAIMAIMPOANA poketra dika mitovy Vicodin online replica watches mividy ultram online frontline plus ho an'ny alika
Apr 21, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Raha tena te hampiakanjo azy ianao, alaivo ny plugin Stylish ho an'ny Firefox ary apetraho ity lohahevitra ity - Wow!